Otu esi abawanye PPC Mgbasa ozi ROAS Na Nkeji 5 na Google Analytics | Martech Zone
You na-eji data Google Analytics iji bulie nsonaazụ mgbasa ozi AdWords gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị na-efu na otu n'ime ngwaọrụ kachasị enye aka na ịntanetị! N'ezie, enwere ọtụtụ akụkọ dị maka igwu data, ị nwere ike iji akụkọ ndị a iji bulie Mgbasa Ozi PPC gị n'ofe osisi.
Tinye n'ọrụ Google Analytics iji melite gị Laghachite na Ad Sp (ROAS) niile na-eche na, n'ezie, ị nwere AdWords gị, yana Akaụntụ Google Analytics synced n'ụzọ ziri ezi na "Ebumnuche" na "Ecommerce Conversion Tracking" na-arụ ọrụ.
Banye na Akaụntụ Google Analytics gị. Pịa na Nnweta> AdWords> Mgbasa ozi. Pịa na Ojiji Sitentanetị ma ị ga - ahụ nsonaazụ metric ndị a: Oge, Nlele Peeji, Oge Oge, Oge Ọhụrụ, Ọnụego Bounce, Mgbaru Ọsọ na Ntinye
Naanị na nkeji ise, ị ga - ahụ ihe ise ga - eme ka mkpọsa PPC gị kwalite naanị nsonaazụ ndabara:
Oge - Thekpụrụ ndabara ga-egosi gị oge niile na saịtị gị, mana ị nwekwara ike ịlele nleta PPC na-ebuga na saịtị gị. PPC, na igbe a, ọ bụ naanị 1.81% nke oge niile, n'ihi obere mmefu ego. Oge Oge Oge ga-abụ akara aka gị maka etu ị ga-esi nyocha arụmọrụ gị niile.
Oge Oge - Nkezi oge nke usoro saịtị ahụ bụ 2:46 (akwụ ụgwọ) vs. 3:18. Ọ bụghị ihe ọhụụ na PPC okporo ụzọ inwe Oge Nkezi Nkezi ala, ọkachasị na peeji ọdịda nke raara nye saịtị ahụ, mana ebumnuche bụ iji mee ka nleta ndị ahụ niile rue opekata mpe nkeji atọ kwa oge. Imeziwanye Oge Oge a nwere ike ịghọ Ihe Mgbaru Ọsọ.
Bilie Ọnụego - Ọnụego bounce na-adịkarị elu na peeji PPC Landing Pages, n'ihi na ha bụ otu ibe. Anyị anaghị ahọrọ ịtụ ụjọ na ọnụ ọgụgụ ndị a dị elu, belụsọ na anyị hụrụ ha ka ha na-arị elu karịa 80%. Lee, anyị nwere ike ịhụ na Bounce Rates nke mkpọsa ahụ sitere na 28% ruo 68%. Nwere ike ịhọrọ ịlele Taabụ Ngwaọrụ na akuku aka ekpe aka ekpe, ma rịba ama na ụdị ngwaọrụ niile (Desktọpụ, Mobile, na Mbadamba ụrọ), ọnụọgụ ndị ahụ dị n'ime ọkwa nkịtị. Ugbu a, anyị ga-elele Ad Otu nhọrọ, ma hụghị nsogbu ọ bụla.
Mmezu Mgbaru Ọsọ - Agbanyeghị na mkpọsa ụgwọ anyị na-akwụ ụgwọ maka 1.81% nke mkpokọta Sessions, ha na-ewepụta naanị 1.72% nke Mgbaru Ọsọ zuru ezu (Na-eduga + Azụmaahịa). Ebumnuche, onyinye a ga-adị ka Pasent nke Oge, nke enwere ike nweta site na imezi Ihe Mgbaru Ọsọ ruo 10.2%. Vingkwalite onyinye nke Mgbaru Ọsọ na Oge E nwere ike ịtinye aka dị ka Ebumnuche ọzọ.
Ego ha ga enweta - Ozi ọma nke mkpọsa a bụ na naanị 1.81% nke Nleta na-eweta 6.87% nke ego niile. Na nọmba ndị a, ịgaghị agọnahụ na PPC na-arụ ọrụ ahụ nke ọma maka saịtị a. Ike inyocha nọmba ndị a nwere ike igosi gị ebe ị nwere ike ịbawanye mmefu ego gị ma ghara itinye nnukwu ihe ọghọm nke ida ego na mkpọsa PPC. Mana tupu ị bawanye mmefu ego ahụ, were nkeji iji nyochaa arụmọrụ nke ROI na oke. Na-ele anya na nọmba ndị a ga-enye gị nkọwa siri ike banyere ma ị ga-abawanye or mana anyị enweghị oge iji lebara ihe niile anya n'otu ọkwa!
Yabụ, n'ime naanị nkeji ise, anyị ekwenyela Ebum n'uche atọ iji melite na:
Ba ụba na Oge Oge ruo ihe karịrị 3:00 kwa ibe.
Imeziwanye Ogo nke Mgbaru Ọsọ Maka Oge (usoro Ecommerce dị mma, nsonaazụ na-egosi na ntụgharị ntụgharị maka mmemme Lead Gen ga-abụ ebe dị mma ịmalite)
Na-enyocha nke anyị ROI na oke metrik iji mee ka ndị gụrụ akwụkwọ na ndị nwere obere ihe ọghọm na mmụba mmefu ego maka mkpọsa PPC.
Biko mara na ọnụnọ weebụ gị dị iche na nke anyị, na ahụmịhe ọ bụla ga-apụ iche. Nsonaazụ gị nwere ike ọ gaghị abụ nke anyị, mana ngwa ọrụ ndị a ga - enyere gị aka inyocha nsonaazụ ndị ahụ, agbanyeghị ọnụọgụ ha.
Anyị ga-achọ ịnye gị enyemaka ụfọdụ iji bulie ihe mgbaru ọsọ ndị ị setịpụrụ n'oge nkeji ise. Ndị a bụ ụzọ ole na ole dị mfe ị nwere ike isi gbanwee ihe Mgbaru Ọsọ ndị a ma nyere gị aka PPC mgbasa ozi inweta ROI ka ukwuu n’ebughi ịba ụba na mmefu ego gị karịa ihe ị nwere ike imeli.
Melite Oge Oge
Nke mbụ, anyị ga-alaghachi Isi mmalite okporo ụzọ> Mgbasa ozi> AdWords.
Ọzọ, anyị na-ele ọrụ anyị anya site na mkpọsa. N'ime mgbasa ozi ise anyị na-arụsi ọrụ ike, mmadụ abụọ nwere Nkezi Oge Nkụzi nke karịa 3:30. Ya mere, anyị ga-elekwasị anya na atọ ndị fọdụrụ.
Anyị nwere 40 Ad Otu, na 10 nke ndị a nwere Nkezi Oge Oge Durations <2:00.
n'okpuru AdWords> Isiokwu, anyị na-edozi site na Oge Oge Oge, ma chọpụta Keywords 36 na Nkezi Oge <1:00.
Ugbu a tupu anyị amalite ịgbanyụ Keywords, ka anyị lelee arụmọrụ site na Ọnọdụ isiokwu.
Họrọ Isiokwu ma setịpụ akụkụ nke abụọ na Nkezi Oge Oge.
N'ihe atụ a, isiokwu anyị ahọpụtara na-arụ ọrụ nke ọma n'ofe-osisi:
Top 1 - 02: 38 (Ọnọdụ 1)
Top 2 - 07: 43 (Ọnọdụ 2)
Top 3 - 05: 08 (Ọnọdụ 3)
Akụkụ 1 - 03:58 (Ọnọdụ 4)
Ọnọdụ Mgbasa Ozi Nkezi Anyị maka Keyword a - kwa AdWords - bụ 2.7, yabụ anyị na-akụrịrị ọ ourụ anyị maka ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na Ọnọdụ Adetị Adị anyị dị elu karịa 2.0 (1.0 ka 1.9), anyị ga-atụle iweda Max Bidoro anyị CPC ka ị daba na ọkwa Ad na-arụ ọrụ dị elu.
Arụ ọrụ nke Keywords ndị ọzọ nwere ike ịkọwa mmụba na ọnụahịa Max CPC ma ọ bụrụ na arụmọrụ ha siri ike na ọkwa Ad dị mma.
Wordsfọdụ Keywords ga-erubere kwesịrị “ezumike nka,” na anyị ga-akwụsịtụ ma ọ bụ hichapụ ha na anyị AdWords Akaụntụ.
N'okpuru Daypart Tab, anyị na-achọpụta ihe ndị a:
4am - 00:39
5am - 00:43
6am - 00:20
Dabere na nsonaazụ ndị a, anyị na-aga na Akaụntụ AdWords anyị iji dozie Nhazi Usoro iji hụ na mgbasa ozi anyị anaghị agba n'etiti 4am ruo 7am.
Tupu ịkwụsịtụ Otu Mgbasa Ozi, anyị kwesịrị inyocha peeji ọdịda anyị maka ọdịnaya dị mma. Ogo ọdịnaya dị oke mkpa maka ịga nke ọma.
Chọpụta ma degharịa ma ọ bụ hichapụ ọdịnaya nke na-agbagwoju anya, na-ezighi ezi, na-ezighi ezi, ma ọ bụ nke ochie.
Ajuju ma achọrọ ọdịnaya ụfọdụ.
Nwaleenụ ọdịnaya ka amụma mkpuchi na ndị ọbịa nwere ike mfe soro ntuziaka na mezue chọrọ omume.
Melite ọdịnaya site na arụmọrụ arụmọrụ na-adịghị mma.
Zụlite ụkpụrụ arụmọrụ kacha nta ma degharịa ma ọ bụ hichapụ ọdịnaya ọ bụla na-adịghị arụ ọrụ.
Mepụta Peeji Ọhụrụ ọhụụ iji mezie ajụjụ Achọrọ, Ọdịnaya Ad, na Ọdịnaya Peeji Ọdịdị.
Na mmechi, Peeji nke idị ugbu a egosighi vidiyo, anyị ga-ekwusi ike na agbakwunye ha (karịa n'okpuru okpu Ntugharị Ntugharị).
Dabere na nchọpụta anyị n’oge nyocha mbụ, anyị kpebiri na Lead Gen akụkụ nke mmemme anyị na-arụ ọrụ. Ebumnuche anyị dị nso bụ ịbawanye ọnụego ntụgharị ntụgharị nke naanị ihe karịrị 10%. Nke a bụ ebe anyị ga-ebido (na saịtị na n'ime Akaụntụ AdWords anyị)
Ntụle nke Ibe anyị. Ebee ka anyị na-ezipụ ndị mmadụ? Ndị ọrụ ga-ahapụ ma ọ bụrụ na ha achọtaghị ihe ha chọrọ ma ọ bụ mkpa ha ozugbo.
Ànyị akọwaala nke ọma ihe azụmahịa anyị bụ ma ọ bụ ihe ọ bụ?
Ànyị na-emesi ngwaahịa ike ma ọ bụ Ngwọta Ọrụ kama atụmatụ?
Anyị enwere Ọdịiche Pụrụ Iche maka Ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ anyị achọtaghị na saịtị asọmpi?
Anyị na-arịọ maka oke ozi?
Anyị enwere vidiyo na peeji nke ndabata? Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-achọ itinye. Na ahụmịhe anyị, ọnụnọ nke Vidiyo na - enye bulie n’etiti 20% -25% na ọnụego ntụgharị, ma ndị ọrụ n'ezie Ele ha anya ma ọ bụ na ọ bụghị!
Ọ bụrụ na anyị enweghị peeji PPC Landing Pages, anyị na-eziga ndị ọrụ na ibe weebụsaịtị dị mkpa nke nwere ozi bara uru ma zuo oke banyere ngwaahịa ma ọ bụ uru ha na-achọ?
Gịnị bụ onyinye anyị? Kedu ka o si arụ ọrụ nke ọma? N’oge na-adịbeghị anya, anyị nwalere inye ngosi ma ọ bụ nnwale, ikpe a na-enye Demo karịa 100%. Kasị njọ, Direct Sales dara 75% n'etiti ndị ọrụ gosipụtara na ngosi Demo. Ma Mpịakọta Lead na Revenue tara ahụhụ.
Ànyị nwere oku siri ike iji mee ihe?
Anyị emeela ihe niile anyị nwere ike ime iji mee ka atụmanya iru ma ọ bụ igbochi ndị na-adịghị mma? Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị ahịa anyị ejirila ngwa ọrụ "Ndị ana-akpọ." Emeziiri nke a site na iji Keywords Keywords na mkpọsa anyị iji wepu ụdị ajụjụ a (na mmefu mmefu).
Mepụta ma ọ bụ Dezie Ed Ad iji melite arụmọrụ Ad.
Nyochaa ntụgharị ntụgharị maka Keywords niile. Ghaa ezumike nká ndị na-arụ ọrụ n'okpuru ụzọ mbata arụmọrụ kacha nta (TBD).
Ebee na kedu ihe kpatara ndị ọbịa ji na-esi na Mmemme Mgbanwe Ebumnuche anyị?
N'ime oge nyocha nke 5, anyị chọpụtara na PPC na-apụ na-eme ihe ndị ọzọ na-akpata okporo ụzọ n'ihe gbasara Pasent nke Ahịa Ahịa vs. Pasent nke Total Traffic. Ugbu a, anyị laghachi na nchịkọta Google iji kwado mmụba mmefu ego PPC.
Maka nyocha a, anyị abanye na Akaụntụ Google Analytics anyị wee banye na ya Mgbanwe> Nkesa na n'okpuru Typedị, họrọ AdWords. Ntọala Ndabere bụ Mmekọrịta Ikpeazụ na isi Dimension bụ Mgbasa Ozi.
Echiche a na-enye anyị data na Mgbasa Ozi, Nkwụ ụgwọ, Ntughari Mmekọrịta Ikpeazụ, Mmekọrịta Ikpeazụ CPA, Uru Mmekọrịta Ikpeazụ, na Nloghachi na Ad Spend (ROAS).
E nwere isi ihe abụọ dị mkpa ka anyị buru n’uche tupu anyị agaa. N'ihe atụ a, ụlọ ọrụ ahụ nwere akụkụ dị mkpa ma chọọ inwe ROAS nke 1,000% (10 ka 1 ROI) iji baa uru, ma na-arụ ọrụ na obere Budget, nke na-enye ohere maka uto.
Na nlele, anyị na-ahụ otu n'ime mkpọsa ise nwere ROAS> 1,000%. Na-esote, anyị na-agagharị na ngosipụta nke arụmọrụ site na Ad Group, ma chọta otu atọ Ad na ROAS n'etiti 2,160% na 8,445% n'otu n'otu.
Mgbasa ozi nke abụọ na nke atọ Ad Group na-arụ ọrụ ugbu a na ROAS> 800%.
Anyị nwere ike ịdabere na 1,000% ROAS Goal na mgbasa ozi nke abụọ site na iwepu otu ma ọ bụ karịa otu Ad. Mgbasa ozi ndị ọzọ na-eme ugbua + 38% vs. Mgbaru ọsọ. Anyị nwere ike iji obi ike kwado ka a na-emefu ego kwa ọnwa na mkpọsa abụọ.
Otu ato Ad n’enweghi uche maka mmefu ego; nke anọ nwere ike ịkwaga na ndepụta anyị mgbe njikarịcha (gbanyụọ isiokwu na-adịghị mma ma ọ bụ Ndepụta Ngwaahịa).
Ọ bụ ezie na enweghị mmesi obi ike ịga nke ọma, anyị chere na mmụba 50% na mmefu ga-eme ka ego nweta ego bara uru, a na-atụle ihe niile. N'okwu a, maka $ 700 ọzọ agbakwunyere emefu, anyị ga-atụ anya ịhụ mmụba nke $ 11,935 na Revenue!
Gịnị Mere Ihe A Nile Ji Dị Mkpa
Dịka onye njikwa SEM, ọrụ gị anaghị akwụsị mgbe ị na-ebugharị okporo ụzọ na saịtị; ọ ka na-amalite amalite.
Dive na Akaụntụ Google Analytics gị, bido site na otu akụkọ, ma hụ ole ị ga - achọta naanị na nkeji ise. Cheedị ọtụtụ ihe ị ga - achọpụta mgbe ịlele ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ ị nwere ike nyochaa!
Tags: ihe mgbaru ọsọ nchịkọtaAttributionụba ọnụegomkpọsantughari ntughariecommerce ntụgharị nsusongosipụtaMgbaru ỌsọGoogle Analyticsgoogle nchịkọta mgbanwe nsusogoogle nchịkọta ihe mgbaru ọsọMkparịta ụka mmekọrịta ikpeazụIkpeazụ mmekọrịta CPAIkpeazụ Mmekọrịta Urunleta ọhụụnlele ihu akwụkwọakwụ ụgwọ ọchụchọkwụọ ụgwọ njikwa ọ bụlappconye njikwa ppclaghachi na mgbasa oziEgoiberibeNjikwa Nchọgharị Injin ỌchụchọWepụtagaa na ogenleta
Sysomos Gaze: Nlekota onyonyo na vidiyo maka Social Media
Gịnị bụ Real-Bidding (RTB)?
Sep 15, 2015 na 11: 48 AM
Hi Chris, ozi a na-adọrọ mmasị, mana ọ dị ka ọ bụ ihe mgbe ochie ka Google gbanwere okwu ha na ihe ị na-eji azụ na 2013. http://marketingland.com/google-changes-menu-options-adds-new-reports-in-google-analytics-61060 Dịka ọmụmaatụ, ha gbanwere "Isi mmalite okporo ụzọ" gaa "Nnweta" yana "Nleta" bụzi "Oge."
Ọzọkwa, ụzọ gị: Isi mmalite okporo ụzọ> Mgbasa ozi> AdWords> Mgbasa ozi
Ugbu a: Nnweta> AdWords> Mgbasa ozi
Ma, nseta ihuenyo izizi ị gosipụtara dịkwa iche ugbu a… don't nweteghị Oge Oge na ihuenyo ahụ ọzọ. Otu ụzọ ị ga - esi nweta ya ugbu a bụ ịga Nnweta> Okporo ụzọ niile> Isi mmalite / Ọkara wee nyo maka CPC.
Ọ bụ ezigbo ozi, mana ọ ga-adị mma ịhụ nke a na ntanetị, usoro na data.
Daalụ maka nghọta gị!
Sep 17, 2015 na 12:27 PM
Daalụ Mark! Chris zitere m akwụkwọ mmelite na nseta ihuenyo emelitere ma weghachite isiokwu ahụ.